Ajọ Ifufe Otto meriri Central America | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ Ifufe Otto meriri Central America
Image - Nseta ihuenyo nke weebụ ụwa.nullschool.net
Oge oke ifufe nke Atlantic agafebeghị. Ọ Ajọ Ifufe Otto, nke dị na Central America, amanye ịkwapụ nke ihe karịrị mmadụ 10.000, ma kpatara ọnwụ nke atọ na Panama.
Ugbu a ọ na-eru Costa Rica nso, nwere ifufe na-adịgide adịgide nke 120km / h.
1 Nhazi nke Ajọ Ifufe Otto
Nhazi nke Ajọ Ifufe Otto
Onyonyo - NOAA, nke akara ụbọchị Nọvemba 22, 2016.
Otto guzobere Mọnde gara aga, Nọvemba 21, ihe dịka 530 km ọwụwa anyanwụ Nicaragua. Agbanyeghị, ọ siri ike ngwa ngwa na Tuesday nke iri abụọ na abụọ ọ ghọrọ ajọ ifufe nke Atiya 22, nwere ikuku nwere ọsọ ọsọ karịa 120km / h yana njem njem nke 4km / h. N'ụbọchị ahụ, site na Costa Rica ruo Panama, ajọ ifufe a lekwasịrị anya nke ọma, e nyekwara obodo ndị dị na Panama bụ́ Colón na Nargana Island aka ná ntị banyere oké mmiri ozuzo.
N’abalị iri abụọ na otu nke ọnwa Nọvemba, o belatara wee bụrụ ajọ ifufe nke ebe ọzọ, ifufe karịrị 23 km / h. N'oge ahụ, ọ dị 100km si Costa Rica na 300km si Bluefields, na Nicaragua. Na agbanyeghị nke a, ndị ọchịchị kpọkuru ndị bi na ya ka ha ghara iweda nche ha: Otto nwere ike ịgba onwe ya ume ọzọ tupu ya etie Costa Rica ihe.
Ekwe omume Okporo ụzọ Oké Ifufe Otto. Foto - Wunderground.com
Ma nke ahụ bụ ihe meworo. Otto Atula 1 hurricane ọzọ nwere ifufe karịrị 120km / h. Maka ebumnuche nchekwa, e nyelarị ịdọ aka na ntị mgbochi ma tinyekwa atụmatụ mmepụpụ n'obodo ndị dị n'ụsọ osimiri.
Nke a bụ ọnọdụ nke gbagwojuru anya site n’enweghị ahụmịhe nke ifufe, na enweghị ezigbo akụrụngwa iji nagide oke ifufe. N'ihi ya, Ndị ọchịchị Costa Rican kpọpụrụ ndị niile bi na obodo ndị na-adịghị ike, ọbụna megide uche nke ọtụtụ n'ime ha, tupu Hurricane Otto erute mba ahụ.
Maka echi Fraịde na ngwụsị izu, a na-atụ anya na ọ ga-ada mbà.
Anyị hapụrụ gị vidiyo nke edere na Panama mgbe ụzọ Otto gafere:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ Ifufe Otto meriri Central America
Ala ọmajiji 7,2 na-eme Nicaragua ka ha na-eche ọbịbịa nke Ajọ Ifufe Otto
Imirikiti ndị US Hispanic na-eche maka mgbanwe ihu igwe